Waxaa dheer mashiinada tolida, kuwa ugu fiican oo leh dalabyo aan la celin karin
Mashiinnada dharka lagu tolo
Dunida tolida ayaa soo jiidata dad aad iyo aad u tiro badan. Inaad karti u leedahay inaad wax ka beddesho dharka ama, inaad si faahfaahsan u sharaxdo naqshadahaaga mar walba waa wax lagu qanciyo. Sidaa darteed, waxaa jira qaar badan oo maalin kasta go'aansada inay iibsadaan kooda mashiinka dharka ugu horreeya. Kuwo kale waxay u baahan yihiin inay wax yar ka sii socdaan tanina, waxay sidoo kale u baahan doonaan mishiin ku habboon baahidooda.
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa noqon kara doorashadaada ugu fiican, markaa ha seegin wax kasta oo aan maanta kuu sheegno. Laga soo bilaabo mishiinnada tolida kuwa ugu jaban uguna fudud ee kuwa bilowga ah, xad dhaaf ama kuwa ugu xirfada iyo wershedaha badan, keebaad dooranaysaa?
mashiinada tolida si ay u bilaabaan
Haddii aad raadineyso mid mashiinka tolida si uu u bilaabo, Hoos waxaad ka heli doontaa afar nooc oo ku habboon kuwa bilawga ah ama shaqooyinka fudud:
Tusaale Qaababka Qiimaha
Fanaanada Balanqaadkii 1412
-Noocyada tolida: 12
-Dharka iyo ballaca tolmada: La hagaajin karo
-4-tallaabo otomaatig ah badhanka
-Astaamooyin kale: nakhshad is haysta, tolmo xoojin ah, zig-zag 133,24 €
Eeg bixintaXusuusin: 9 / 10
Fanaanada 2263 Dhaqan
-Noocyada tolida: 16
-Dharka iyo ballaca tolidda: La hagaajin karo ilaa 4 iyo 5 mm siday u kala horreeyaan
-Botonhole si toos ah 4 tallaabo
Tilmaamo kale: Tolmo toosan iyo zigzag, qalabyo, cag riixid 137,75 €
Qaabka Alpha 40
-Noocyada tolida: 31
-Dharka iyo ballaca tolida: La hagaajin karo ilaa 5 mm
- Tilmaamo kale: LED, cagta la hagaajin karo, biraha spool haysta 189,99 €
Eeg bixintaXusuusin: 10 / 10
-Noocyada tolida: 40
-5 godad badhan oo toos ah, 1 tallaabo
Sifooyin kale: Functions for patchwork iyo quilting 171,31 €
Inkastoo aysan ku jirin shaxda kore, sidoo kale ma sii deyn kartid Mashiinka harqaanka Lidl, nooc cajiib ah oo lagu bilaabo laakiin helitaankiisu ku kooban yahay kaydka dukaamada waaweyn.
Waxaad ku habboonaan doontaa mid kasta oo ka mid ah moodooyinka miiska, laakiin haddii aad rabto in aad wax yar ka ogaato mid kasta oo iyaga ka mid ah, hoos waxaan kuu sheegi doonaa sifooyinka ugu muhiimsan ee mid kasta oo ka mid ah mashiinnada tolida kuwaas oo noqday ikhtiyaar ku habboon kuwa raba inaad ka bilowdo aduunka tolida ama kuwa raadinaya doorasho tayo-wanaagsan oo qiimo leh:
Fannaanka Ballanqaadka Machine...
Haddii aad raadinayso mashiinka tolida aasaasiga ah oo leh sifooyinka muhiimka ah si aad u bilowdo, ah Mashiinka dharka tolida Ballanqaadka 1412 adigaa ahaan doona. Haddii aad qorsheyneyso inaad sameyso hawlo fudud sida hamming ama zipping, iyo sidoo kale badhamada, ayaa kuugu fiicnaan doona. Intaa waxaa dheer, waa mashiinka tayada leh oo qiimo fiican leh. Way fududahay in la isticmaalo oo sida aynu nidhaahno, waa ku habboon tahay haddii aad hadda bilaabayso. Inkasta oo ay leedahay 12 tol oo kala duwan, waa inaad ku darto festos qurxinta.
Qiimaheedu inta badan waa agagaarka 115 euros waana awoodaa halkan ku noqo.
Fanaanada 2250 Dhaqan
Fanaanada 2250 Dhaqan -...
Waa mid ka mid ah mashiinka dharka lagu tolo ee ugu wanaagsan, sidaas darteed, waxaan horey u haynaa xog wanaagsan. Waxay leedahay shaqooyin badan iyo sidoo kale lama huraan marka laga bilaabo adduunka tolida. Sidoo kale, ma aha oo kaliya, tan iyo wadarta guud ee 10 tol, waxay sidoo kale noqon doontaa mid qumman marka aad hore u leedahay aasaaska. Markaa, ma ahaan doontid mid gaaban. Waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud, markaa waxaad u qaadi kartaa hadba baahidaada.
Qiimaha mashiinka tolida ee lagu bilaabayo waa qiyaastii 138 euros y halkan ayaad ka iibsan kartaa
Mashiinka Tolidda ee ALFA,...
Mid kale oo ka mid ah mishiinnada lagama maarmaanka ah waa Alfa Style 40. In ka badan wax kasta sababtoo ah waa mid aad u fudud, dhammaan kuwa si dhib yar u leh fikradda tolida. Maxaa intaas dheer, Shaqadiisu aad bay u dhammaystiran yihiin sida dunta toosan, batoonka godka 4 tillaabo. Waxa kale oo ay leedahay nalka LED, iyo sidoo kale daab lagu gooyo dunta. Xasuusnoow inay jiraan 12 tol ah oo lagu daray laba qolof oo qurxin ah. Maxaa aasaas u noqon doona shaqooyinka ugu badan.
Xaaladdan oo kale, qiimuhu wuxuu kor u kacaa qiyaastii 180 euro. Halkan ka iibso.
Mashiinka CS10 walaal...
Haddii aad rabto in aad naftaada ku dhiirigeliso marka hore mashiinka dharka elektarooniga ahTani waxay noqon doontaa moodelkaaga ugu fiican. Ma aha sababtoo ah waa elektaroonigga waa ay adagtahay in la isticmaalo, taas lidkeeda. Marka lagu daro tolmooyinka aasaasiga ah ee aasaasiga ah, waxaad sidoo kale bilaabi kartaa tallaabooyinkaaga ugu horreeya ee adduunka boobka iyo sidoo kale koofiyadaha. Way fududahay in la isticmaalo sida xulashada shaqada aan fulineyno, dhererka iyo ballaca tolid kasta waana taas.
Waxyaabaha wanaagsani waa marka aad taqaanid sida loola shaqeeyo kuwa ugu fudud, waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad wax yar ka sii dheeraato, iyada oo ay ku mahadsan tahay sida ay u dhamaystiran tahay. Waxaas oo dhan qiimo ku saabsan 165 euros. Haddii aad jeceshahay, waad awoodaa halkan ka iibso.
Haddii aad rabto in aad aragto noocyo badan oo mashiinada tolida walaal, Gali iskuxirka aan hada kaaga tagnay.
mashiinnada harqaanka oo jaban
Haddii waxa aad raadinayso ay tahay ikhtiyaarka ugu jaban ee dhammaan, markaa waxaad haysataa mashiinada dharka ugu jaban inkasta oo aanu sidoo kale dooranay moodooyinka qaarkood oo qiimo weyn ku leh lacag:
-Noocyada tolida: 13
-Dharka iyo ballaca tolmada: Lama hagaajin karo
- 4 faalig ah oo garaac ah
-Astaamooyin kale: Irbad laba jibaaran 115,36 €
-Noocyada tolida: 17
-Dharka iyo ballaca tolmada: 2 cabbir
Astaamo kale: Dabaylo toos ah, iftiin, cudud bilaash ah Wax alaab ah lama helin.
Fanaanada Fudud 3221
-Noocyada tolida: 21
-Botonhole otomaatig ah 1 mar
- Tilmaamo kale: iftiin, cudud bilaash ah, dunta tooska ah 179,99 €
Eeg bixintaXusuusin: 9/10
Alpha Xiga 40
-Noocyada tolida: 25
-Botonhole si toos ah 1 tallaabo
- Tilmaamo kale: adkaysi, fudaydka dunta 232,99 €
Mashiinka Jata MC695...
Waxaan wajahaynaa mid ka mid ah mashiinnada harqaanka ee ugu jaban. Jata MC695 wuxuu leeyahay wadar ahaan 13 nooc oo tol ah. Aad bay u badan tahay mashiinka aad u fudud in la isticmaalo iyo iftiin marka ay timaado in la raro. Waxay leedahay qalabyo badan, iyo sidoo kale iftiin isku dhafan. Ku fiican kuwa bilaabaya laakiin sidoo kale kuwa horeba wax badan u raba. Waxaa laga yaabaa in barta xun ay tahay in dhererka iyo ballaca tolida aan la hagaajin karin.
Qiimaheedu waa mid aan la celin karin oo adiga ayay noqon kartaa 113 euros. ma iyada ayaad rabtaa Halkan ka iibso
Mashiinka Tolidda Fannaanadda...
Waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican. Fikradaha ayaa isku raacay in ay tahay mashiinka tolida in lagu bilaabo, laakiin sidoo kale dadka u baahan wax dheeraad ah muddada gaaban. Markaa, haddii aad wax yar maalgashan karto, kani waa moodelkaaga. Waxay leedahay 21 tol ah oo leh nidaamiye dherer iyo ballac ah. Maxaa intaas dheer, wuxuu ku siin doonaa 750 tol daqiiqadii, cudud xor ah iyo iftiin isku dhafan.
Xaaladdan oo kale, waxaan ku sharadnay qiimo weyn oo lacag ah taasina waa in kasta oo aysan ahayn mid raqiis ah sidii labadii nooc ee hore, Singer Simple waa qaab gelid cajiib ah oo adiga kugu ah 158 euro oo aad awoodid halkan ka iibso
ALFA Xiga 40+ Guga...
Mid kale oo ka mid ah mashiinnada tolida ee leh tayada sare waa kan. Nooc cusub oo ah Mashiinada dharka lagu tolo Xiga. Waxaa jira moodooyin badan oo ka mid ah noocyadan kuwaas oo leh sifooyin isku mid ah. Laakiin kiiskan, waxaan ka tagnay Alfa Next 45. Ku habboon kuwa hadda bilaabaya ama kuwa sidoo kale raba in mashiinka dharka ee ugu horreeya uu sii dheeraado. Iyadoo 25 tol ah iyo 4 qolof ah oo qurxin lehWaxay buuxin doonaan waxaad ka filayso.
Alfa Next 45 waa nooc qiimihiisu yahay kudhowaad 225 euro maxaadse awoodaa halkan ka iibso Helitaanka helitaankoodu waa xadidan yahay markaa haddii aysan haysan kayd markaad iibsanayso, waxaad ka iibsan kartaa nooc kasta oo ka mid ah qoyska xiga maadaama ay aad isugu dhow yihiin xagga sifooyinka.
Toyota SPB15 - mashiinka...
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu jaban waa kan. The mashiinka dharka toyota SPB15 Waa mid ka mid ah fursadaha ugu weyn. Waa cufan, fudud waxayna leedahay 15 nooc oo tol ah. Waxaa ka mid ah, waxaan muujineynaa 4 nooc oo qurxiyo ah, tolida cirifka iyo sidoo kale zig-zag. Waxa kale oo ay leedahay kabaal-celin aad u faa'iido badan.
Qiimaha Toyota SPB15 mishiinka tolida waa 112 yuuro oo kaliya waadna awoodaa halkan ka iibso.
mashiinada tolida xirfadeed
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin a mashiinka tolida xirfadeed, hoos waxaan ku siinaynaa qaar ka mid ah moodooyinka ugu dhameystiran ee kuwa raadinaya faa'iidooyinka iyo shaqooyinka tayada wanaagsan:
Bernett Tolo&Go 8
-Noocyada tolida: 197
-7 indhaha 1 tallaabo
Tilmaamo kale: Quilting, Patchwork, 15 boos oo irbado ah 349,99 €
Heesaaga Curvy 8770
-Noocyada tolida: 225
-6 indhood 1 garaac
Astaamaha kale: Qaababka alifbeetada, Xarfaha Wacan Qiimaha lama heli karo
Eeg bixintaXusuusin: 8 / 10
Fanaanada Starlet 6699
-Noocyada tolida: 100
-6 indhaha 1 tallaabo
- Tilmaamo kale: 12 jagooyin irbado, qaab-dhismeedka birta 279,99 €
Heesaaga Quantum Stylist 9960
-Noocyada tolida: 600
-13 indhaha 1 tallaabo
Tilmaamo kale: 2 nalalka LED, 26 boosaska irbado 749,00 €
-Noocyada tolida: 60
Sifooyin kale: Muujinta LCD, Dhererka labajibbaaran cag 649,00 €
Marka aan ka hadalno mashiinnada tolida ee xirfadleyda ah, waxaan cadeyneynaa inaan horeyba uga hadalnay ereyo waaweyn. Sifooyin badan oo loogu talagalay u dhammayso shaqooyinka sidii xirfadle. Xaaladdan oo kale, Bernett Sew&Go 8 wuxuu naga tagayaa wadar ahaan 197 tol. Kuwaas oo 58 ka mid ah ay yihiin kuwo la isku qurxiyo. Waxa kale oo aad ka heli doontaa wadar ahaan 15 boos oo irbado ah iyo dhererka labanlaab ee cagaha riixaha. Aad bay u adkaysanaysaa waxayna leedahay cudud xor ah.
Qiimaha mashiinka dharka ee xirfadlaha ah waa 399 euros waana awoodaa halkan ka iibso
Heesaaga Curvy 8770 -...
Shaki la'aan, waxaan wajahaynaa mid kale oo ka mid ah xulashooyinka ugu fiican. Kahor calaamad aan dhammaanteen naqaanno oo had iyo jeer ina tusa xulashooyinka ugu fiican. Kiiskan, waxaa lagu daray wadar ahaan 225 tol. Dabcan mahad taas waxaad u ogolaan kartaa mala-awaalkaagu inuu duulo. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay qaabab, oo leh dhererka tolida la hagaajin karo iyo ballaca iyo nidaamka dabaysha oo toos ah. Irbad laba jibaaran iyo todoba nooc oo godad badhan ah...maxaa dheeraad ah oo aan codsan karnaa?
Haddii aad xiisaynayso, waxaad iibsan kartaa Fannaanka Curvy aquí.
Horay waxaanu ku bilownay wadar dhan 100 tol. Marka, waxaan horeyba u heli karnaa fikrad ah inay tahay mashiin kale oo noo ogolaan doona inaan horay u sii wadno mar kasta oo aan rabno. Dhererka iyo ballaca iyaga waa la hagaajin karaa. Intaa waxaa dheer, waa in la xuso in ay leedahay 12 boos oo irbado ah iyo sidoo kale cudud bilaash ah iyo iftiinka LED. Xataa maro qaro weyni ma caabbin doonaan.
In kasta oo ay tahay mashiinka tolida ee xirfadda leh, Singer Starlet 6699 waxa ay noqon kartaa kaaga oo keliya 295 euros. Ma rabtaa halkan ka iibso
Fanaanada Quantum Stylist...
Dabcan, haddii aan ka hadalno mashiinnada tolida xirfadlayaasha ah, ma iloobi karno Singer Quantum Stylist 9960. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah kuwa wax kasta oo aad maskaxda ku hayso ay ku dhaqmi doonaan. Waxay leedahay 600 oo nooc oo tol ah, dhererkeeda iyo ballaceedaba waa la hagaajin karaa. Waxaan dhihi karnaa waa sidaas mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan suuqa.
Qiimaheedu waa 699 euros laakiin taa beddelkeeda waxaan heli doonaa mid ka mid ah mashiinnada dharka ee ugu wanaagsan suuqa oo aad iibsan karto halkan ka
Alfa Model 2160-Mashiinka...
Waxaa nalooga tagay nooca mashiinka Alfa oo leh sifooyin qumman, oo leh shaashad LCD ah oo aad u fudud in la isticmaalo. Sidoo kale noqon doona ku habboon dhar dhumuc weyn leh, si aad u qabato shaqooyin kala duwan oo leh natiijo fiican. threader otomaatig ah, iyo sidoo kale 60 tol ah iyo todoba nooc oo godad badhan ah.
Qiimaha mashiinka dharka ee xirfadlaha ah waa 518 euro oo aad awoodid halkan ka iibso
Sida loo doorto mashiinka dharkayga ugu horreeya
Doorashada mashiinka tolida ee ugu horreeya waxa laga yaabaa inaanay hawl fudud ahayn. Dhammaanteen waxaynu ka fikirnaa mashiin wanaagsan oo adkaysi u leh oo qabta shaqo dhammaystiran oo wanaagsan. Laakiin marka lagu daro tan, waxaa jira faahfaahin kale oo la tixgeliyo.
Maxaan ku siin doonnaa?
In kasta oo ay noqon karto mid ka mid ah su'aalaha soo noqnoqda, waa lama huraan. Haddii aad kaliya u isticmaali doonto shaqooyinka aasaasiga ah, markaa maaha mid u qalma in aad wax badan ku bixiso mashiinka xirfadlaha ah. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah ma isticmaali doontid kala badh hawlaheeda. Hadda, haddii aad jeceshahay adduunka tolida, ha iibsan mashiinka aasaasiga ah. Waxa ugu fiican waa in uu yahay mid dhexdhexaad ah, in uu leeyahay hawlo dhowr ah iyo in uu noo ogolaado in aan hore u sii soconno wax yar. Haddii kale, muddo gaaban gudaheed waxay noqon doontaa xoogaa duug ah baahidayada.
Hana welwelin haddii aanad garanayn sida loo maareeyo marka hore, halkan waad awoodaa baro tolida aad u fudud oo cad.
Maxay yihiin sifooyinka ay tahay in mashiinka tolida ee ugu horreeya uu yeesho?
noocyada tolmada: Mid ka mid ah qodobbada lagu xisaabtamayo waa tolnimada. Shaqooyinka aasaasiga ah, mishiin yar ayaa ku fiicnaan doona. Haddii kale, dooro kuwa tolmo badan leh. Dhererka tolku waa muhiim marka la shaqeynayo maro dhumuc weyn. Markaa, waxaan u baahan doonaa tolmo dheer. Ballaca tolida sidoo kale waa muhiim haddii aad rabto inaad qabato shaqo sida dhig xargaha laastikada ah ama daboolka.
isha isha: Waxaa jira farqi aad u yar oo u dhexeeya. Dabcan, samaynta badhan dalool afar tallaabo la mid ma aha samaynta hal. Wax maskaxda lagu hayo tan iyo faahfaahintan waxaan samayn karnaa badhanno kala duwan oo dharka ah.
jagooyinka irbadda: Mar kasta oo mashiinka tolida uu leeyahay boosas badan, fursadaha badan ee aan heli doono marka la dooranayo noocyada kala duwan ee tolida.
brand mashiinkaGuud ahaan, had iyo jeer way fiican tahay inaad kalsoonidaada geliso noocyada caanka ah ee caanka ah. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah waxaan ognahay in aan bixineyno tayada wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxaan haysan doonaa adeeg farsamo oo badan oo gacanta ah iyo sidoo kale qaybo kala duwan oo aan u baahanahay.
PotenciaFadlan la soco in mishiinada leh awood ka yar 75W kuma haboona in lagu tolo dhar qaro weyn.
Xusuusnow in mashiinka tolida uu leeyahay faa'iidooyin badan. Mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn waa isagoo awood u leh inuu dhowr euro ku badbaadiyo dharka. Waxaa hubaal ah in aad quusto marka caruurtu ay waayaan dhar cusub ama marka aad dukaanka tagtid oo aadan helin wax baahidaada daboolaya. Hadda waxaad bedeli kartaa waxaas oo dhan, adigoo leh dulqaad yar iyo dadaal. Xaqiiqdii:
Xaaladahan, ha u oggolaan inaad naftaada la yaabto mashiinada harqaanka maadaama ay aad u adag tahay in la maareeyo, maantana loo isticmaalo qurxin ka badan wax kasta oo kale. Haddi ay miisaaniyadu dhibaato kugu tahay, had iyo jeer waxaad miciin bidi kartaa iibsi mashiinada tolida gacanta labaad.
Mashiinka tolida guriga vs mashiinka tolida warshadaha
Ma taqaana ugu weyn Farqiga u dhexeeya mashiinka tolida ee guriga iyo mashiinka dharka ee warshadahaisaga? Shaki la'aan, waa faahfaahin kale oo ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan bilaabin inaad iibsato mid ka mid ah labada. Halkan mar kale waxaa jira dhowr arrimood oo ay tahay inaad ogaato.
mashiinka dharka ee guriga
Sida magaceeda ka muuqata, Mashiinka tolida gudaha waa midka leh shaqooyinka aasaasiga ah ee shaqooyinka ugu badan. Waxaa ka mid ah waxaynu ku iftiiminaynaa hawlaha tollida ee aynu wada naqaanno. Dharka hagaajiso, tolo ilmada, tolmada ama siibadaha.
Mashiinka tolida warshadaha
Waxaa loogu talagalay shaqooyinka ugu culus. Waxay dammaanad qaadayaan qaar shaqo xirfad leh oo leh tolmo adkaysi badan. Mashiinnada dharka lagu dhejiyo ama xargaha ayaa ku habboon mashiinka noocan ah. Wax aan laga fikirin saaxiibadeed. Waxaas oo dhan ka sokow, waa in la dhahaa marka la rabo mishiin noocaan ah, waxaa sabab u ah maalin walba shaqo aad u fiican iyo sababtoo ah waxaan horeyba uga khibrad badan nahay adduunka dharka. Waxaa loogu talagalay inay ku shaqeeyaan tiro badan oo dhar ah oo aan ahayn oo kaliya inay ku jiraan warshad, laakiin sidoo kale inay joogaan guriga.
Waxay na siinayaan xawaare u dhexeeya 1000 iyo 1500 tolliin daqiiqadii, dabcan sidoo kale waxay leedahay dhinac taban. Waxay isticmaali doontaa tamar ka badan mashiinka caadiga ah waxayna samayn karaan buuq ka badan kuwa kale.
Halkee laga iibsan karaa mashiinka dharka
Maanta waxaan leenahay meelo badan oo aan ka iibsan karno mashiinka dharka. Dhinaca kale, waxaan leenahay dukaamada waaweyn, suuqyada waaweyn iyo sidoo kale dukaamada halkaas oo aad sidoo kale ka heli karto alaabta kale ee guriga. Dabcan, marka lagu daro, waxaad sidoo kale haysataa dhibcaha rasmiga ah ee matalaya mid kasta oo ka mid ah noocyada mashiinnada.
Laakiin haddii aadan rabin inaad saacado ka qaadato meel ilaa meel kale, iibinta internetka waa mid kale oo ka mid ah xulashooyinka gaarka ah. Bogagga sida Amazon Waxay leeyihiin dhammaan noocyada moodooyinka., iyo sidoo kale sifooyinkeeda si fiican loo faahfaahiyay iyo qiimooyin tartan ah. Dhab ahaantii, waxaad xitaa badbaadin kartaa dhowr euro marka loo eego dukaamada jirka.
Dhammaan mashiinnada dharka lagu tolo waxay wataan qalab badan. Dabcan, tani waxay ku xirnaan kartaa nooca moodelka. Xitaa sidaas oo ay tahay, qaybaha spare-ka ayaa had iyo jeer noqon doona mid ka mid ah saldhigyada iibsashadayada. Marka ay timaado iibsashada iyaga, ilaa iyo inta aad eegto qeexida mashiinkaaga. Halkaa waxay kuu sheegi doonaan nooca gaarka ah ee aad u baahan tahay ama, haddii ay taageerto kuwa caalamiga ah.
Marka xigta waxaan arki doonaa qalabka tolida ugu badan:
In kasta oo aan u malaynayno in ay noogu adeegi doonto dunta aan haysanno, waligeed kuma filna. Mararka qaarkood, waxaan u baahanahay midabyo badan, doorashooyin badan oo asal ah oo maskaxda ku haya. Xusuusnow inay lama huraan tahay in la haysto dunta polyester-ka iyo waliba daabacaadda. Bakhaarka aad ka soo gadato mishiinka, waxa ay sidoo kale haysan doonaan iyaga.
Inkasta oo mashiinno badan ay hore u haysteen, waxaa habboon in la tixgeliyo. Waad ku mahadsan tahay iyaga, waxaad samayn kartaa noocyo kala duwan oo tol ah. La'aantood ma ahaan kartid!
Haddii cagaha riixaya ama duntu ay yihiin aasaas, ka waran cirbadaha? Qaarkood waxay la yimaadaan mishiinkeena, laakiin xusuusnow in qaar ay lumin karaan jidka. Markaa mar walba gacanta ku hay dhowr irbadood. Way fiicantahay in la doorto irbado dhowr maro oo kala duwan ah Iyo tayo wanaagsan.
Oo ay la socdaan bobbins, waxaa fiican in la raadiyo kiis. Habkaas midna kuma waayi doontid. Way fiicantahay inaad haysato 12 ama 15. Taas maskaxda ku hay!
qalabyada ku jira xirmada
Haddii aad aragto inaadan rabin inaad haysato qalabkan si gaar ah, waxaad had iyo jeer iibsan kartaa waxa loogu yeero xirmada. Gudaha, waxaad ka heli doontaa waxa ugu muhiimsan marka lagu daro maqas qaar ka mid ah qaabab kala duwan si ay ugu habboonaadaan shaqadeena. Sidoo kale ma seegi kartid gooyayaasha iyo cajaladaha si aad u cabbirto.
23 comments on «»
July 31, 2018 saacadu markay tahay 6:34 pm
Waxaan ka labalabeynayaa walaal cs10, walaal fs40, heesaa 6699, alfa comoakt 500
July 31, 2018 saacadu markay tahay 6:35 pm
Kee baa ugu dhammaystiran lahaa?
Ogast 1, 2018 at 9:35 am
Waa salaaman tahay Lorena,
Qiimaha lacagta, Singer Scarlet 6699 waa guuleystaha. Haddii aad rabto midka ugu dhammaystiran, markaa Compakt 500E Plus laakiin qiimihiisu aad buu u sarreeyaa.
Janaayo 2, 2019 markay ahayd 1:43 pm
Hi sanad wanaagsan!!
Waxaan jeclaan lahaa inaad i caawiso fadlan, waxaan haystaa gabadh 8 jir ah oo aad u jecel moodada iyo naqshadaynta dharka ilaa yaraanteedii, waa wax ku yimaadda dhaladeeda, waa dareenkeeda, maalmo ka hor ayaan arkay. mashiinka dharka lagu tolo ee lidl qiyaastii 78 euro ka badan ama ragga si fiican uma xasuusto, arrintu waxay tahay in ay ahayd tii ugu dambaysay oo aan ku qancin inaan iibsado sababtoo ah faahfaahin yar.
Ma ahan inaan doonayo inaan lacag badan ku bixiyo, laakiin si fiican, ma rabo inaan iibsado wax hadhow igu adkeynaya inaan helo qalabyada, iwm, sababtoo ah waxaan ku nool nahay jasiiradaha Canary wax walbana si tartiib tartiib ah ayey u socdaan. Fanaanada waan aqaanay nolosheyda oo dhan, gurigayga waligeed waa uu yaalay, waxaana jeclaan lahaa in aan helo mid tayo ahaan iyo qiimo ahaanba ku wanaagsan waxaana iga lumay hadii ay tahay Fanaan ama mid kale oo aad ku taliso. Waxaan rabnaa in aan u isticmaalno si aan wax u barano oo ay noogu darto in muddo ah inta aan horumareyno, ma i caawin kartaa oo ku talin kartaa qaar fadlan.
Janaayo 2, 2019 markay ahayd 2:56 pm
Sida aad ii sheegayso, qaabka aan aadka ugu talinayaa waa Ballanqaadka Fannaanka oo ah mishiin fudud, balse la isku halayn karo, isla markaana ay fududahay in la isticmaalo, taas oo u oggolaanaysa in gabadhaada inay horumariso xirfaddeeda dhinaca tolidda.
Markaad waayo-aragnimo korodhsato, waxaad awoodi doontaa inaad sameyso boodboodka noocyo badan oo dhammaystiran, laakiin bilawga, tani waa ikhtiyaarka ugu badan ee lagu taliyay shaki la'aan, sidoo kale hadda waa iib.
Daawooyinka ayaa soo galin doona
Febraayo 22, 2019 markay ahayd 3:41 pm
assalaamu calaykum waligayga waxa aan lahaan jiray tolida ,laakin hadda waxa aan rabaa in aan wax kale tolo midda aan hayona igama soo jawaabto,internet-ka in badan ayaan ku arkay laakiin ma go'aansan karo,waxa aan u baahanahay caawimadaada, shaki ayaa iga galay. ku saabsan walaalka cx 7o, ama heesta STARLEYT 6699. .aad baad u mahadsantahay
Labada kee baa tolnimada ka fiican?
Maarso 1, 2019 markay ahayd 10:04 am
Moodooyinka aad soo jeedisay, labaduba waa xulashooyin aad u fiican, ku dhawaad ​​xirfadle. Mashiinka heesaha ayaa aad u dhameystiran maadaama uu leeyahay tolmo badan (100 vs. 70).
Dhanka Brother CX70PE, waa nooc ka badan Patchwork-oriented sidoo kale waa qiyaastii 50 euro ka jaban kan Heesaha, marka haddii aad baahidaada la kulanto moodelkan, waa doorasho kale oo weyn.
Abriil 9, 2019 markay ahayd 9:10 am
Waxaan raadinayaa mashiinka dharka lagu tolo ee la qaadan karo oo aad u dheereeya tan iyo markii aan bartay in aan tolida dharbaaxada hore ee hooyaday alfa iyo refrey iyo kuwa aan ka arkay asxaabta oo aad u gaabis ah.
Waxaan u baahanahay tolida caadiga ah laakiin sidoo kale awood u leh tolida alaabta qaro weyn sida maqaar. Miisaaniyaddaydu waxay ku dhowdahay €200-400. Waxaa jira magacyo badan iyo fikrado badan oo aanan garaneynin meel aan ka bilaabo. Kuwee ayaad igula talinaysaa anigoo ku xisaabtamaya inaan raadinayo xawaare, adkeysi, iyo karti badan.
Abriil 9, 2019 markay ahayd 10:47 am
Sida aad noo sheegayso, model la jaanqaadi kara waxa aad raadinayso waa Fannaanka Heavy Duty 4432. Waa mishiin adag (jidhkeedu waa macdan bir ah oo saxan ah), degdeg ah (1100 tol ah daqiiqadii) oo la taaban karo. ( waxaad toli kartaa dhammaan noocyada maro waxayna leedahay 32 nooc oo tol ah).
Waxa ugu fiican ayaa ah inay si fiican ugu habboon tahay miisaaniyadaada.
Abriil 16, 2019 markay ahayd 9:55 am
Subax wanaagsan, waxaan xiiseynayaa inaan iibsado mishiinka dharka cusub, tan iyo kan aan haysto, waxaa iga maqan awood jiidis iyo dherer labanlaab ah oo cagaha riixaya. Waxaas oo dhan waxaan ka tolay cajalad naylon ah oo lagu dahaadhay maro suuf ah, waxaa jira meel aan ka tolo 2 xabbo oo naylon qaro weyn leh iyo suuf. Mashiinka aan hadda haysto heesaaga, oo si fiican iigu shaqeeya, laakiin waxaa iga maqan awood jiidid. Mashiinkee ayaad ku talinaysaa?
Abriil 22, 2019 markay ahayd 11:20 am
Awood intee le'eg ayuu mishiinkaagu hadda leeyahay? U fiirso Singer Heavy Duty si aad u aragto haddii ay ku habboon tahay baahiyahaaga.
Abriil 25, 2019 markay ahayd 1:44 pm
hello, waxaan haystaa fannaanka fannaanka ah oo aan gacan labaad ku iibsaday, hadda oo aan dunidan hore ugu soo biiray, wax badan ayaan doonay, gaar ahaan maryaha ka adag iyo in aan wax badan sameeyo, maxaad igala talinaysaa, waxaan eegayay alfaska. in aan ka helay naqshadeynta runta, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado taladaada.
Abriil 26, 2019 markay ahayd 11:00 am
Adiga oo aan ogeyn waxa ay tahay miisaaniyadaada, way adagtahay in lagugula taliyo maadaama kala duwanaanta xulashooyinka ay aad u ballaaran yihiin oo ficil ahaan nooc kasta oo € 150 ah ayaa horeyba uga sarreeyay mashiinkaaga hadda. Laakiin waxaan u baahan lahaa inaan ogaado haddii aad rabto inaad ku bixiso € 150, € 200 ama € 400 si aan ku siiyo xulashada mashiinka dharka ugu fiican ee ku saleysan baahidaada.
Xogta aad na siisay, waxa kaliya ee aan ka fikiri karo waa in aan kula taliyo Fanaanada Duty culus si ay u tosho dharkaas ka adag.
2-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 1:04 pm
Waxaan rabaa in aan saaxiibteyda siiyo mishiinka tolista dhalashadeeda. Waxay raacaysay tolida, naqshadaynta moodada iyo koorsooyin kale muddo sannado ah, laakiin wax fikrad ah kama haysto adduunkan mashiinka tolida. Waxay u baahan tahay inay samaysato dhar iyada u gaar ah oo ay fikradaheeda iyo sawir-gacmeedkeeda u tarjunto wax la taaban karo. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inay noqoto wax ecological ah, oo aan ka dhigan wax badan oo ku saabsan isticmaalka korontada. Mashiinkee ayaad ku talinaysaa?
Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada!
3-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 10:04 am
Anagoon ogayn miisaaniyadaada, aad bay noogu adag tahay inaan ku talino mashiinka dharka lagu tolo.
Marka la eego heerka deegaan ahaan, dhammaantood waxay u yimaadaan inay ku qaataan qaddar isku mid ah oo iftiin ah kiisaska intooda badan. Si kastaba ha ahaatee, waa tiro aad u jaban oo lagu ogaanayo biilka korontada (ma ka hadlayno qaboojiyaha ama foornada, taas oo wax badan cunaysa).
Haddii aad na siiso qayb ka mid ah waxa aad rabto inaad kharash garayso, waxaanu ku caawin karnaa waxoogaa ka sii fiican.
15-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 5:14 pm
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada. Waxaan gabi ahaanba ilaaway inaan qoro miisaaniyada, waxay u dhaxaysaa 150 ilaa 300 euro.
16-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 9:55 am
Waxaan wax kuugu soo qorayaa su'aashaada ku saabsan mishiinka tolida ee aad iibsanayso.
Maadaama aad u rabto hadiyad ahaan qofka horeyba u lahaa aqoonta moodada iyo tolida, waxaa fiican inaad ku sharaddo moodal bixiya noocyo kala duwan oo tolid ah. Taas awgeed, Alfa Pratick 9 waa mid ka mid ah musharixiinta ugu fiican ee aad sidoo kale bixiso. Waxaadna haysataa miisaaniyad badan haddii aad sidoo kale rabto inaad bixiso buug tolida, qalabyada ama xitaa daboolka.
Haddii aad miisaaniyadaada wax yar ka sii dheeraato, waxaad haysataa mashiinka dharka elektarooniga ah ee Compakt 500E kaas oo bixiya xitaa naqshado tolmo oo badan oo ku jira horyaal kale marka ay timaado la shaqayntiisa.
June 18, 2019 at 11:07 waxaan ahay
Salaamu caleykum, waxaan xiisaynayaa in aan soo iibiyo mishiinka tolida oo lagu daabaco calaamado ama xarfo. Ma ii sheegi kartaa moodelkee sameeya? Wacan oo dhan
June 18, 2019 at 11:17 waxaan ahay
Waxaan kuugu soo qorayaa fariinta aad nooga tagtay mareegahayaga tolida.
Sida aad sheegtay, waxa ugu badan ee lagula talinayaa waa in aad qaadato mashiinka dharka lagu tolo ee Patchwork, waa kuwa bixiya fursadaha ugu badan marka ay timaado xarfaha xarfaha iyo sawirro kala duwan.
Tusaale ahaan, Alfa Zart 01 waa musharax weyn oo wadada ka baxsan. Wax walba waad ku samayn kartaa.
Sebtember 27, 2019 saacaddu markay ahayd 11:49 am
Subax wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaad fikradaada iga dhiibto saddex mashiin oo aan haysto aragtiyo Practical Alpha 9 Elna 240 iyo Janome 3622 ama mid aad is leedahay si fiican ayuu iigu shaqeeyaa, mahadsanid, waxaan sugayaa jawaabtaada
Noofambar 10, 2019 saacaddu markay ahayd 10:24 pm
Waan jeclahay balooggaga, wax badan bay i caawisaa. Waxaan bilaabayaa inaan barto jarista, harqaanka iyo samaynta naqshadaynta sababtoo ah waxaan jeclaan lahaa inaan naftayda u huro. Waxaan rabaa in aan maalgashado mishiin wanaagsan oo igu sii jira oo faa'iido u leh dharka oo dhan ka sarreeya. Ma doonayo in aan ku dul maro, taas oo ah, ma aha kan ugu aasaasiga ah (ma aha kan ugu qaalisan ee aanan u baahnayn) midkee ayaad ku talinaysaa?
Aad baad u mahadsantahay !!!!
Noofambar 11, 2019 markay ahayd 8:41 am
Shakhsi ahaan, waxaan kugula talineynaa Alfa Pratik 9. Waa mashiinka tolida oo dhan oo si fiican u shaqeeya labadaba isticmaalayaasha aan khibradda lahayn iyo kuwa horeyba u lahaa aqoonta lagama maarmaanka ah si ay uga faa'iideystaan ​​​​dhammaan fursadaha.
Sebtember 2, 2020 at 2:59 pm
Salaamu caleykum, waxaan leeyahay heesaaga 4830c, laakiin hadda si fiican uma shaqaynayo, midkee ka mid noqon lahaa isla astaanta, midka la midka ah ama wax yar ka sarreeya, hadda, mahadsanid.
Waan aqbalayaa shuruudaha asturnaanta *
Ka mas'uul ah xogta: AB Internet
Ujeedada xogta: Xakamaynta xatooyada, maaraynta faallooyinka.
Xiriirinta xogta: Xogta looma gudbin doono qolo saddexaad marka laga reebo waajibaad sharci ah.
Kaydinta xogta: Database ay marti galisay Shabakadda Occentus (EU)
Xuquuqda: Waad xaddidi kartaa, soo kaban kartaa oo tirtiri kartaa macluumaadkaaga wakhti kasta.
Mashiinka harqaanka Lidl
Mashiinnada dharka alfa
Mashiinada tolida walaal
Mashiinnada dharka lagu tolo ee heesaha
Mashiinka Mashiinka Qadiimiga ah
Dusha ka saar
Qiimaha la dhimay
Mashiinnada tolida ee Maalinta Prime Day
mashiinada harqaanka Jimcaha madow
mashiinada tolista Isniinta internetka
Noo qor fariin
Mashiinka dharka 2022 - Siyaasadda Asturnaanta - Macluumaadka ku saabsan buskudka